Daawo Somaliland oo Itobiya dacwad u gudbisay,Gaashaamo Ugaadeen baa xasilooni u diidan |
Daawo Somaliland oo Itobiya dacwad u gudbisay,Gaashaamo Ugaadeen baa xasilooni u diidan
buy baclofen online without prescription, buy lioresal online. clomid buy online, buy clomid.
Wasiirada Arrimaha Gudaha, Gaashaandhiga, Cadaalada iyo Warfaafinta ayaa shalay gaaray xarunta Gobolka Togdheer, halkaas oo ay kulan kula qaateen qaar ka mid ah duubabka dhaqanka Somaliland.
Guriga martida Burco ayey ugu sameeyeen odayaasha afur iyo casho waxaana la iska waraystay xaalada degmada Gaashaamo.
Odayaasha waxaa weheliyey dad goob joog u ahaa maatadii ciidamada Itoobiya ku laayeen Jaamac dubad, kuwaas oo si mug leh uga warbixiyey sidii gabood falkaasi u dhacay.
Dhibaatada deegaankaas ka taagan, sababaha keenay inay marar badan soo noqnoqoto iyo sidii xal waara loogu heli lahaa ayaa ka mid ahaa qodobadii kulankaas lagu jeex jeexay.
“Degsiimada halkaas degan iyo dowlada Itoobiya isma arkaan, xumaanina ma dhextaal, laakiin cida u dhexeysa ee xasuuqa nagu haysaa waa beesha Ugaadeen” Ayuu yiri mid ka mid ah duubabka dhaqanka oo warbixin siinayey Wasiirada.
Odayaasha iyo Wasiiradu waxay isla fahmeen in beesha Ugaadeen oo adeegsanaysa shaarka dowladnimo ee kilika shanaad ay masuul ka tahay dhibaatadaas, Sida uu Faaqidaad u sheegay mid ka mid ah xubnihii goobta joogey.
Xiriirka Dowlada Federaalka Itoobiya iyo Somaliland ayey Wasiiradu xuseen inuu yahay mid heer sare ah oo ku dhisan deris wanaag, wadashaqayn iyo iskaashi, Sidaa darteedna loo baahanyahay in laga fogaado xaalada kasta oo xumayn karta.
“Waa kala hadlanay dhacdadii Gaashaamo dowlada Itoobiya waxanay naga balanqeen inay baari doonaan, waxaanu idin ku boorinaynaa in lagu kalsoonaado baaritaankaas oo aan laga hordhicin” Ayuu ku yiri odayaasha Wasiirka Arrimaha Gudaha Somaliland Warancade.
Kulankaas oo qaatay mudo ka badan 4 saacadood ayaa ku soo idlaaday jewi degan waxaana la isku raacay in laga shaqeeyo sidii xal waara loogu heli lagaa xaalada cakiran ee ka taagaan degmada Gaashaamo.
Qaar ka mid ah odayaashii la kulmay Wasiirada.
Dadka deegaanka iyo Xukuumada Somaliland ayaa si mug leh ugu eedeeyey Jigjiga inay masuul ka tahay gabood falkii ka dhacay Jaamac Dubad.
Balse, Madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar wuxuu ku tilmaamay dhacdadaas inay ahayd gacan ka hadal ku dhacay si shil ah, Waana beeniyey in dad badan oo rayid ah halkaas ku dhinteen.
Somaliland oo kala hadashay Itoobiya gaboodfalkii Jaamac dubad (Warbixin hore).